Iqembu lezigelekeqe ebelisabisa abashayeli be-Uber libanjwe ngamaphoyisa | Scrolla Izindaba
Iqembu lezigelekeqe ebelisabisa abashayeli be-Uber libanjwe ngamaphoyisa
Okokuqala ngqa eminyakeni emibili, uBoy Ncube uzokwazi ukulanda bese ehambisa abagibeli e-New Brighton, e-Port Elizabeth, ngemuva kokudunwa imoto futhi wacishe wabulawa ngowe-2019.
UNcube ungomunye wabashayeli be-Uber abadunwa imoto babanjwa inkunzi yizigelekeqe ezintathu ezasabisa abashayeli be-e hailing kanye namabhizinisi aphethwe abantu bokufika.
UNcube uzamukele izindaba zokuthi iqembu lezigelekeqe elidumile liboshwe ngoLwesithathu ngemuva kokubulala omunye umshayeli ngeledlule.
“Ngikholwa ukuthi amaphoyisa asebambe abantu abafanele ngoba izigameko eziningi zokudunwa kwezimoto kanye nokubanjwa kwenkunzi zenzeke e-New Brighton. Ngiyajabula ukuthi sengikwazi ukushayela ngaphandle kokwesabela ukuphepha kwami,” kusho uNcube.
Isisulu sakamuva seqembu lezigelekeqe nguGarrison Snayers owatholwa edutshulwe wabulawa kwi-Suzuki yakhe e-New Brighton mhla zi-17 kuNhlolanja. Amaphoyisa athi uSnayer ubesebenza njengomshayeli wamatekisi e-hailing eshayelela umnikazi wemoto.
Okhulumela amaphoyisa, uColonel Priscilla Naidu uthe, ithimba le-New Brighton Task Team elingaphansi kukaColonel Vuyisiwe Tembani lilandelele labo ababhekene necala lokubulawa komshayeli wetekisi ngoLwesithathu.
Uthe, uTembani wasungula ithimba ngeSonto, ngemuva kohambo lwesikhumbuzo olwenzeka endaweni okwashonelwa kuyo uSnayer. Kuboshwe abasolwa abathathu, abaneminyaka ephakathi kwengama-25 nama-28.
UNaidu uthe, abasolwa ababili bafunwa ngamaphoyisa e-Motherwell nase-New Brighton ngamacala ahlanganisa ukubulala, ukutholakala nesibhamu esingekho emthethweni kanye namacala amabili okubamba inkunzi. Uthe, abasolwa kulindeleke ukuthi bavele eNkantolo yeMantshi yase-New Brighton kungekudala ngecala lokubulala.
Obambele u-Commander, uBrigadier Thandiswa Kupiso uthe, umphakathi ungamehlo kanye nezindlebe zamaphoyisa.
“Ukubaluleka kokubambisana okuqinile phakathi kwamaphoyisa nomphakathi kubalulekile kakhulu,” kusho uKupiso.
UNcube wenqabile ukuthathwa isithombe sakhe nemoto yakhe.